Uurlon Ahrage Erite akwa na ọnụ ahịa ụgbọ ala | Rayson
N'ịdabere na teknụzụ dị elu, ezigbo ike nrụpụta, na ozi zuru oke, Rayson na-ebute ụzọ ugbu a ma na-agbasa rayon anyị n'ụwa niile. Yana ngwaahịa anyị, a na-enyekwa ọrụ anyị ka ọ bụrụ ọkwa kachasị elu. Uurlon Arydard Raysion Rayson bụ onye na-emepụta zuru oke na onye na-eweta ngwaahịa dị elu na ọrụ otu nkwụsị. Anyị ga-eme ya, dịka oge niile, na-arụ ọrụ ngwa ngwa. Maka nkọwa ndị ọzọ gbasara ọnụahịa matran nke ahịhịa na ngwaahịa ndị ọzọ, naanị ka anyị mara. Nyochaa rayson ga-ekpuchi akụkụ ole na ole. Ebubo dị obosara, ogologo, dị mma, ịkwọ ụgbọ ala, sọlfọ), nchekwa, na ihe ndị ọ bụla na-agbaso ụkpụrụ na ụkpụrụ dị mkpa.